15 Deeq waxbarasho oo dhamaystiran oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Yurub Hada
Halkan waxaa ah liis faahfaahsan oo ah deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Yurub. Deeqdani waxay ka kooban tahay kuwa laga heli karo Yurub iyo kuwa laga heli karo dibadda Yurub laakiin Yurub iyo malaha dhammaan ardayda caalamiga ah ayaa xaq u leh inay codsadaan.
Mid ka mid ah hagayaasheena la soo uruuriyay oo ku saabsan sida loo sugo deeqaha waxbarasho ee dibada si fudud, waxaan ku nuuxnuuxsannay xaqiiqda ah in inta badan deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahiba ay dalbadaan in codsadayaasha mar hore la dhigto koorso ka hor inta aan la siin deeq waxbarasho iyo macnahaas, jaamacadaha ku yaal Yurub iyada oo aan lahayn khidmadaha dalabka si looga caawiyo ardayda caalamiga ah inay sugaan gelitaanka bilaashka ah ee ay ku daba geli karaan deeqaha waxbarasho.
Waxaad sidoo kale fiirin kartaa hageheena muujiya wadamada yurub ugu jaban ardayda taasi waxay u baahan kartaa inay dulsaar u rogto si loo dhimo kharashyada.
1 15 Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Yurub - Waa La Maalgaliyay
1.1 DAAD deeqda waxbarasho ee masters iyo Ph.D. gudaha Jarmalka
1.1.1 Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho ee DAAD
1.1.2 Koorsooyin la heli karo oo loogu talagalay deeqda waxbarasho ee DAAD
1.2 Deeqaha Dowladda Finland
1.2.1 Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho ee Dowladda Finland ee ardayda Yurubta iyo kuwa Caalamiga ah
1.2.2 Koorsooyin u qalma deeqda waxbarasho ee Dowladda Finland
1.3 Jaamacadda Canterbury Scholarship
1.3.1 Faahfaahinta kale ee Jaamacadda Canterbury Scholarship
1.3.2 Koorsooyin u qalma Jaamacadda Canterbury Scholarship
1.4 Deeqaha Dowlada Sweden
1.4.1 Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho ee Dawladda Iswiidhan
1.4.2 Koorsooyin la heli karo oo loogu talagalay deeqda waxbarasho ee Dawladda Iswiidhan
1.5 Deeq waxbarasho oo caalami ah oo loogu talagalay haweenka ku nool Mareykanka
1.5.1 Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho
1.5.2 Koorsooyinka la heli karo ee Deeqda waxbarasho
1.6 Barnaamijka Deeqaha Dowlada Holland
1.7 Barnaamijka ardayda ajnabiga ee Fullbright ee Mareykanka
1.8 Deeqda Ingiriisiga ee Chevening Scholar
1.9 Jaamacadda Sussex deeqda waxbarasho ee dibloomada ee England
1.10 Deeqda waxbarasho ee heer sare ah ee Switzerland ee Switzerland
1.11 Jaamacadda Oxford Clarendon deeqaha waxbarasho ee Boqortooyada Midowday
1.12 Adelaide Deeqaha Caalamiga ah ee Australia
1.13 Jaamacadda Maastricht deeq waxbarasho sare oo Nederland ah
1.14 Lester B. Pearson barnaamijka deeqda waxbarasho ee caalamiga ah ee Jaamacadda Toronto Canada
2 Inbadan oo ku saabsan deeqaha waxbarasho ee Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
2.1 Waa maxay deeq waxbarasho?
2.2 Sidee Ardayda Caalamiga ah u Codsan karaan Deeqo waxbarasho si ay ugu bartaan Yurub si guul leh
2.2.1 Bilow cilmi baarista hore
2.2.2 Saxiix raadinta deeqda waxbarasho
2.2.3 U oggolow dadka kuu dhow inay ka ogaadaan raadintaada deeqda waxbarasho
2.2.4 Hubso inaad sameyso go'aanka saxda ah ee codsiga markasta
3 Su'aalaha ku Saabsan Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
3.1 Arday dhigta jaamacad ama jaamacad hada jirta ma codsan karaa deeqda waxbarasho ee yurub?
3.2 Immisa deeq waxbarasho ayaa hal qof dalban karaa?
3.3 Talooyin Codsi Deeqo Muhiim ah
3.4 Gunaanad: Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Yurub
15 Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Yurub - Waa La Maalgaliyay
Hoos waxaa ku yaal liiska deeqaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah ee Yurub iyo sidoo kale deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda yurub iyo kuwa caalamiga ah ee wax ka barta Yurub ama dibedda.
DAAD deeq waxbarasho oo loogu talagalay masters-ka iyo Ph.D. gudaha Jarmalka
Deeqda waxbarasho ee dowladda Finland
Jaamacadda Canterbury deeqda waxbarasho ee New Zealand
Deeqda waxbarasho ee jaamacadda Cambridge ee Boqortooyada Midowday
Deeqda waxbarasho ee Iswidhishka
Deeq waxbarasho oo caalami ah oo loogu talagalay haweenka ku nool Mareykanka
Barnaamijka deeqda waxbarasho ee dowladda Holland
Barnaamijka ardayda ajnabiga ee Fullbright ee Mareykanka
Deeqaha waxbarasho ee Ingiriiska
Jaamacadda Sussex deeqda waxbarasho ee dibloomada ee England
Deeqda waxbarasho ee heer sare ee dawladda Switzerland
Jaamacadda Oxford Clarendon deeqaha waxbarasho ee Boqortooyada Midowday
Adelaide deeqaha caalamiga ah ee Australia
Jaamacadda Maastricht deeq waxbarasho sare oo Nederland ah
Lester B. Pearson barnaamijka deeqda waxbarasho ee caalamiga ah ee Jaamacadda Toronto Canada
FIIRO GAAR AH: Deeqdan waxbarasho ee liistada lihi waxay daboolayaan labada deeq waxbarasho ee ardayda caalamiga ah ee wax ka barata Yurub iyo deeqaha waxbarasho ee yurub iyo ardayda kale ee caalamiga ah inay wax ka bartaan dalal kale. Dhamaantood si buuxda ayaa loo maalgeliyaa.
DAAD deeqda waxbarasho ee masters iyo Ph.D. gudaha Jarmalka
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ama Adeegga Isdhaafsiga Tacliinta Jarmalka, waa hay'ad taageerta tacliinta Jarmalka oo diiradda saareysa maalgelinta ardayda caalamiga ah ee wax ka barata Yurub.
DAAD Scholarship waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu fiican ardayda caalamiga ah ee Yurub waqtigan xaadirka ah waxayna ku jirtay muddo dheer hadda.
Ururkani wuxuu bixiyaa deeqo waxbarasho oo dhamaystiran in la barto Ph.D. ama Masters Degree oo ka socda mid ka mid ah jaamacadaha caanka ah ee Jarmalka. Kahor intaadan dalban, waa inaad haysataa BSc. Shahaadada koorsada afarta sano ah ee saxda ah sidoo kale waxaad haysataa laba sano ama in ka badan oo khibrad shaqo ah shahaadada ka dib.
Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho ee DAAD
Waqtiga: 1-3 sano
Xaaladda dalabka deeqda waxbarasho: wali way furantahay
Daboolida caymiska caafimaadka iyo kaalmada safarka
Dukumeenti lagu xaqiijinayo shaqada ayaa loo baahan doonaa
2 waraaqo talo bixin ayaa sidoo kale loo baahan doonaa
Koorsooyin la heli karo oo loogu talagalay deeqda waxbarasho ee DAAD
Qorshaynta Goboleedyada iyo magaalooyinka
Cilmiga Beeraha iyo Dhirta
Sayniska iyo sayniska la xiriira
Sayniska Dhaqaalaha Siyaasadeed
Dawooyinka iyo Caafimaadka Dadweynaha
Sayniska Dabiiga ah iyo Deegaanka
Deeqaha Dowladda Finland
Kani waa deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo ay siisay dowladda Finland ardayda caalamiga ah ee dhigta shahaadada koowaad iyo heerka labaad si ay wax uga bartaan jaamacadaha ku yaal Finland waana u furan tahay ardayda meel kasta oo adduunka ka mid ah oo ay ku jiraan Yurub.
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu caansan ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Yurub ee daboolaya kharashyada tacliimeed ee buuxa.
Dhammaan jaamacadaha iyo kulliyadaha tacliinta sare waxay leeyihiin Fursadaha deeqaha waxbarasho ee Finland ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ku bartaan Yurub.
Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho ee Dowladda Finland ee ardayda Yurubta iyo kuwa Caalamiga ah
Waqtiga: 2-4 sano
Xaaladda dalabka deeqda waxbarasho: Waa dhammaatay
Darajo: Bachelor, Master degree
Caymiska Maaliyadeed: Qayb ahaan iyo Si buuxda loo maalgeliyey
Koorsooyin u qalma deeqda waxbarasho ee Dowladda Finland
Sayniska beeraha (keyry, kalluumeysiga)
Sayniska Caafimaadka iyo Daryeelka
Sayniska Xoolaha (Veterinary Science)
Jaamacadda Canterbury Scholarship
The Jaamacadda Canterbury waxay bixisaa fursado waxbarasho ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan Yurub. Deeqdani waxay u furan tahay jinsiyad kasta marka laga reebo muwaadiniinta New Zealand iyo Australia oo aan u qalmin.
Jaamacadu waxay siisaa ardayda caalamiga ah deeqaha waxbarasho ee bachelor-ka oo si buuxda loo maal-galiyo sanad walba dhammaan dhinacyada tacliinta ee laga heli karo jaamacadda.
Faahfaahinta kale ee Jaamacadda Canterbury Scholarship
Xaaladda arjiga deeqda waxbarasho: Socda
Xilliga Kama Dambeysta ah: Oktoobar sanadkii
Degree: Deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah
Caymiska maaliyadeed: Si buuxda loo maalgeliyo
Koorsooyin u qalma Jaamacadda Canterbury Scholarship
Deeqaha Dowlada Sweden
Tani waa mid si buuxda loo maalgeliyey deeq waxbarasho oo ay bixiso dawladda Iswiidhan ee loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee caalamiga ah inay sii wataan shahaadada Master-ka. Si kastaba ha noqotee, bilaabida sanadahaani way ka duwan tahay sidii ay dowladdu u siisay ardayda caalamiga ah 300 deeq waxbarasho oo ka socota jaamacadaha sare ee Iswidhan ku yaal dhammaan dhinacyada iyo waaweyn.
Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho ee Dawladda Iswiidhan
Nooca Degree: Masters
Xaaladda codsiga deeqda waxbarasho: waa socotaa
Waqtiga: 1-2 sano
Koorsooyin la heli karo oo loogu talagalay deeqda waxbarasho ee Dawladda Iswiidhan
Farshaxanka, Warbaahinta iyo Naqshadeynta
Waxbarashada iyo Sayniska Waxbarashada
Sharciga iyo Daraasaadka Sharciga
Daaweynta xoolaha iyo kalkaalinta
Saxaafadda, Warfaafinta iyo Isgaarsiinta
Sayniska Bulshada iyo Sayniska Dhaqanka
Sayniska Kombiyuutarka iyo Injineerinka
Codsiga deeqdani hadda way furan tahay, markaa horay u soco oo dalbo. Waa deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo u furan arday kasta oo dumar ah oo ku nool Yurub iyo adduunka oo dhan marka laga reebo Iran oo waxay codsan kartaa dhammaan qaybaha tacliinta ee jaamacad kasta oo ku taal Mareykanka.
Ogolaanshahu wuxuu ku imaan doonaa labo dufcadood waqtiga ugu dambeeya ee xulashada dufcadii ugu horaysay waa Abril 20th sanadkiiba halka mudada loo qabtay dufcadda labaad ay tahay 30-ka Juun sanad walba.
Faahfaahinta kale ee deeqda waxbarasho
Nooca Degree: Bsc., Ph.D. iyo Master
Muddada: 1-4 sano waxay kuxirantahay nooca shahaadada iyo koorsada la xushay
Koorsooyinka la heli karo ee Deeqda waxbarasho
Waad codsan kartaa dhammaan qaybaha tacliinta sare ee jaamacad kasta oo ku taal Mareykanka laakiin waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso warqad dalab ah oo ka socota jaamacadda ka hor inta aan la gaarin waqtiga kama dambaysta ah.
Barnaamijka Deeqaha Dowlada Holland
Tani waa deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo u furan ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku sameeyaan masters-ka ama shahaadada bachelorka ee jaamacad kasta oo Nederland ah.
Deeqdan wuxuu daboolayaa dhammaan arrimaha dhaqaalaha sida khidmadaha waxbarashada, kharashka nolosha, iyo caymiska. Sida koorsooyinka waxaad dooran kartaa inaad wax ka barato liiska koorsooyinka ay bixiso jaamacadda aad doorbideyso.
Markii ugu dambeysay ee UK laga baxo Midowga Yurub (BREXIT), deeqdan waxbarasho way sii socon kartaa ama ma sii socon kartaa ama waa laga gaabin karaa wixii ay ahaan jirtay.
Tani waa a barnaamijka deeqda waxbarasho ee ardayda caalamiga ah waana u furan tahay ardayda adduunka oo idil inay codsadaan. Haddii aad tahay arday caalami ah oo doonaya inuu raadsado mastarka ama Ph.D. shahaadada, waad dalban kartaa deeqdan waxbarasho.
Midkani dhab ahaan maahan ardayda doonaya inay wax ku bartaan Yurub laakiin waxaa loogu talagalay ardayda yurub iyo kuwa caalamiga ah ee doonaya inay wax ku bartaan USA.
Deeqdani waxay ka kooban tahay wax kasta oo ka mid ah waxbarashada, kharashyada nolosha, caymiska caafimaadka, iwm. Waa kaalmo dhaqaale oo si buuxda loo maalgeliyo oo dabooli doonta muddada daraasadda. Waxaad dooran kartaa koorso kasta / weyn oo ay bixiso jaamacadda aad doorbideyso ee USA.
Deeqda Ingiriisiga ee Chevening Scholar
Tani waa a deeq waxbarasho oo si gaar ah loo siiyay ardayda leh karti hoggaamineed, oo ay ka heshay dowladda UK, si ay u sii wadaan barnaamijka shahaadada mastarka ee ay doorteen. Waa deeq-lacageed oo dhammaystiran oo aqoonyahannadu waxay dooran karaan qayb kasta / weyn oo ay doortaan oo ay bixiso jaamacadda ay doorbidaan.
Codsiga deeqdan waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo ayaa u socota ardayda doonaya inay sii wataan shahaadada mastarka ama shahaadada jaamacadeed. Qof kastaa oo ka socda adduunka oo dhan wuu ka qaybqaadan karaa xitaa muwaadiniintiisa ayaa ku degdegi kara arjiga maaddaama wakhtigii loo qabtay uu soo dhowaanayo.
Waad u tagi kartaa wax kasta oo weyn oo ay bixiso Jaamacadda Sussex sidoo kale caymiska maaliyadeed ayaa dabooli doona waxbarashadaada, kharashyada noloshaada iyo caymiskaaga caafimaad.
Deeqda waxbarasho ee heer sare ah ee Switzerland ee Switzerland
Deeqdan waxbarasho ayaa loogu talagalay ardayda ka qalin jabisay dhammaan qaybaha daraasadda ee doonaya inay ku sii wataan shahaadada dhakhaatiirta ama shahaadada postdoctoral. Waxaa si buuxda loo maalgeliyey oo xitaa daboolayaa gunno bille ah oo ay weheliso gunooyin kale oo joogto ah oo ay ku jiraan gunnada hoyga.
Iyada oo deeqdan waxbarasho, waxay awoodi karaan inay ku sameeyaan cilmi-baaris mid ka mid ah jaamacadaha dadweynaha ee laga maalgeliyo Switzerland waxayna u furan tahay dhammaan jinsiyadda
Tani waa qorshe deeq-lacageed oo dhammaystiran oo lagu bixiyo qiyaastii 140 aqoonyahanno sanadle ah oo ay bixiso sanduuqa deeqda waxbarasho ee Clarendon. Deeqdani waxay umuuqataa mid qaas ah maadaama lagu abaal mariyo codsadayaasha iyadoo lagu saleynayo heer sare iyo karti dhammaan maadooyinka shahaadada leh ee heerka qalinjabinta.
Sanduuqa wuxuu daboolayaa khidmadaha waxbarashada, kharashaadka nolosha, iyo caymiska caafimaadka oo hadda wuu socdaa arjiga.
Tani waa deeq-lacageed si buuxda loo maal-galiyay oo u furan jinsiyad kasta waana qorshe deeq waxbarasho oo ay ikhtiraacday Adelaide Scholarships International si loo soo jiito ardayda tayada sare leh si kor loogu qaado dadaalada cilmi baarista ee Jaamacadda Adelaide.
Deeqdani waxay daboolaysaa gunnada nolosha ee sannadlaha ah, caymiska caafimaadka iyo khidmadaha waxbarashada.
Tani waa deeq waxbarasho oo ay bixiso UM si loo soo jiito aqoonyahanno karti sare leh oo ka socda adduunka oo dhan si ay ugu sii wataan shahaadada mastarka ee UM. Sanduuqa wuxuu daboolayaa kaalmada nolosha, caymiska caafimaadka iyo khidmadaha waxbarashada.
Kani waa barnaamij deeq waxbarasho ah oo ka socda Jaamacadda Toronto oo la siiyay ardayda caalamiga ah ee muujiya guul gaar ahaaneed ee waxbarasho iyo hal-abuur isla markaana loo arko inay yihiin hoggaamiyeyaal ka dhex jira dugsigooda.
Sanduuqa ayaa dabooli doona khidmadaha wax lagu barto, khidmadaha lama filaanka ah, buugaagta iyo kharashka nolosha illaa afar sano.
Inbadan oo ku saabsan deeqaha waxbarasho ee Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
Deeqaha waxbarasho waxay ka caawiyeen arday badan inay gaaraan himilooyinkooda waxbarasho ee nolosha iyo sidoo kale inay ku riixaan jaranjarada xirfadeed, gaar ahaan, deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo.
Deeqda waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo mararka qaarkood way ka duwan tahay deeqaha waxbarasho ee buuxa maxaa yeelay halka deeqaha waxbarasho ee buuxa ay hubiyaan bixinta kaliya khidmadaha wax lagu barto mararka qaarkood, deeqaha waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ayaa daboolaya khidmadaha wax lagu barto, guryaha, quudinta, caafimaadka, duulimaadka ka imanaya codsadayaasha waddanku martigelinayo iyo xaalado badan, waxay sidoo kale ku bixisaa ka-faa'iideystayaasha gunno si loo ilaaliyo shakhsiyan.
Halkan ku yaal Baro Ummadaha Dibedda, Waxaan ka caawinnay in ka badan 300,000 ardayda inay ogaadaan oo ay codsadaan deeqo waxbarasho maantana, waxaan ku dari doonnaa tirooyinka iyada oo loo marayo tilmaamahan cusub ee ku saabsan sida loo helo deeqo waxbarasho oo Yurub ah oo si buuxda loo maalgeliyo ee ardayda caalamiga ah
Deeqgu waa deeq ama lacag la siiyo arday kale si looga caawiyo inay sii wataan waxbarashadooda waxaana lagu bixin karaa iyadoo lagu saleynayo tacliimeed ama guul kale.
Waxaad bilaabi kartaa inaad isweydiiso, sidee qofku ku helayaa fursad waxbarasho? ama maxay yihiin siyaabaha qofku ku heli karo deeq waxbarasho? Wax fiican waxaan ku sameeyay cilmi baaris badan arintan waxaanan hayaa jawaabo sax ah su aalahaaga.
Sidee Ardayda Caalamiga ah u Codsan karaan Deeqo waxbarasho si ay ugu bartaan Yurub si guul leh
Sida arday caalami ah oo doonaya inuu wax ku barto Yurub oo leh deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ama ugu yaraan ugu yaraan deeq waxbarasho oo buuxda, waa inaad tixgelisaa qodobbada soo socda
Bilow cilmi baarista hore
Waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdid baaritaanka hore ee deeqaha waxbarasho maadaama uruurinta macluumaadka waqtiga loogu talagalay ay kaa caawin doonto inaad ogaato sida loo maro. Halkan, waxaan kaa caawinaynaa tan adoo daabacaya fursadaha deeqda waxbarasho maalin kasta waana awoodaa iska diiwaangeli cusboonaysiinta deeqda waxbarasho ee bilaashka ah markaa waxaan kuu soo diri karnaa isku-darka deeqaha waxbarasho ee la heli karo maalin kasta.
Waxaad sidoo kale ku soo biiri kartaa kuweena waxbarasho dibadda ah iyo koox telegram deeq waxbarasho si loola hadlo ardayda kale ee caalamiga ah loona helo cusbooneysiinta deeqaha waxbarasho ee jira. Hadaad nala raac barta twitterka, waxaad noqon doontaa kan ugu horreeya ee wax ka barto wax ku saabsan cusbooneysiinta deeqda waxbarasho ee abid ah maxaa yeelay waxaan ku dhajinnaa isla markiiba waa la daabacaa
Waqtigu runtii waa loo baahan yahay markaad codsanayso deeqaha waxbarasho, horaantii aad u soo gudbisay codsiyadaada ayaa kuugu fiicnayd, dhammaantood, kaliya isku day inaad la kulanto waqtiga kama dambaysta ah ee deeq waxbarasho oo aad codsanayso.
Marka laga reebo la kulanka waqtiga kama dambaysta ah, waxaan kugula talineynaa inaad horay u dalbato, gaar ahaan deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo maxaa yeelay tartanka marwalba aad buu u sarreeyaa halkan oo ay weheliso xaqiiqda ah in arday badan oo caalami ah ay u socdaan Yurub isla markaana intooda badani ay raadinayaan fursado waxbarasho oo kaliya sidaada oo kale
Saxiix raadinta deeqda waxbarasho
Waad isticmaali kartaa annaga mishiinka raadinta deeqaha waxbarasho ee bilaashka ah halkan si loo raadiyo deeqaha waxbarasho ee laga heli karo waddan kasta iyo barnaamij kasta. Waxaad sidoo kale halkan ku riixi kartaa si toos ah deeq waxbarasho ee Yurub.
Raadinta deeqaha waxbarasho had iyo jeer sidoo kale waa hab lagu helo deeqo waxbarasho oo cusub oo lagu dalbado.
Isdiiwaangalinta raadinta deeqaha waxbarasho ayaa kaa caawin doonta inaad hesho deeqo waxbarasho oo u dhigma danahaaga, xirfadahaaga, iyo waxqabadyada waxaadna sameyn kartaa ogeysiisyo habaysan si ay kuu ogeysiiyaan markii si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee Yurub ee u dhigma astaantaada.
U oggolow dadka kuu dhow inay ka ogaadaan raadintaada deeqda waxbarasho
Kala hadal la-taliyaha dugsigaaga, macallimiinta, waalidiinta, iyo dadka kale. Deeqaha waxbarasho ayaa ah fursado waana laga yaabaa inay ka soo baxaan meel kasta, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad kala hadasho dadka ku hareeraysan haddiiba ay fursad soo marto.
Kooxaheena bulshada ee caalamiga ah ee WhatsApp, Facebook, iyo telegram, waxaad kula kulmi kartaa ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee Yurub kuwaas oo kaa caawin kara inaad ku dhaqanto riyadaada inaad wax ku barato dibedda deeq waxbarasho.
Hubso inaad sameyso go'aanka saxda ah ee codsiga markasta
Dalbashada jaamacad / kulleejo ku habboon astaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu guuleysto deeqda waxbarasho.
Inta badan deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah waxay u baahan yihiin codsadayaasha, ugu horreyntii, waa inay codsadaan oo la siiyaa gelitaanka dugsi gaar ah ka hor inta aan loo tixgelin deeqda waxbarasho.
Xaqiiqdii, qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah ee Yurub waxaa si toos ah loo siiyaa iyadoo la tixgelinayo waxqabadkiisii ​​hore ee ardayga iyada oo aan xitaa laga codsan ardayga inuu u fariisto imtixaan kasta oo deeq waxbarasho ah.
Su'aalaha ku Saabsan Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
Arday dhigta jaamacad ama jaamacad hada jirta ma codsan karaa deeqda waxbarasho ee yurub?
Haa, waad awoodi kartaa, gabi ahaanba way u furan tahay qof walba, haddii aad weli ku jirto kuleej ama sannadihii ugu dambeeyay ee aad ku jirtay dugsiga sare haddii aan si kale loo sheegin.
Daabacaad kasta oo deeq waxbarasho ah waxay leedahay shuruudo dalab, markii aad buuxiso shuruudahan iyo aqoon kasta oo kale, waad sii wadan kartaa oo codsan kartaa.
Xaqiiqdii, way ka fiican tahay inaad bilowdo arjiga deeqda waxbarasho ee kulliyadda intaad weli ku jirto dugsiga sare, xusuusnow, horaantii ayaa ka fiicnayd.
Immisa deeq waxbarasho ayaa hal qof dalban karaa?
Waxaa jira malaayiin deeqo waxbarasho ah halkaa ka sii soco oo codso inta aad kari karto, waxaan haystaa ardayda codsanaya illaa iyo 5-7 deeq waxbarasho toddobaad gudihiis.
Deeqaha waxbarasho waa kuwo aad u tartamaya kuwa adagna had iyo jeer way heli doonaan. Marka waligaa ha ku daalin codsi ilaa aad ugu dambeyn dhulka dhigto.
Talooyin Codsi Deeqo Muhiim ah
Noqo mid firfircoon, taasi waa, sii wad codsashada haddii aad kuleejooyinka tahay iyo haddii kale
Faahfaahin ka bixi faahfaahinta
Si fiican u feejignow
Haddii dalabku ku lug leeyahay a qorista qoraalka maqaalka, sida ugufiican
Macno malahan haddii aad tahay arday caalami ah oo doonaya inuu wax ku barto Yurub ama meel kasta oo adduunka ah talooyinka iyo siyaabaha loo dalbado deeqda waxbarasho ee aan kor ku soo sheegay waa isku mid, raac si taxaddar leh u raac hubaal waad guuleysan doontaa.
Gunaanad: Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Yurub
Kuwa doonaya deeqaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah ee Yurub, ku haynta tilmaamahan ayaa kuu sameyn doona wax kasta oo wanaagsan maadaama ku guuleysiga deeqaha waxbarasho ee Yurub ay inta badan tahay mid aad u tartan badan waxaadna u baahan tahay dadaal dheeri ah si aad uga sii mid ahaato tartanka.
Marka, kadib baaritaankeygii oo dhan waxaan awooday inaan la imaado liiska 15 deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Yurub xilligan waxaanan go'aansaday inaan qoro oo aan faahfaahin ka bixiyo mid kasta oo ka mid ah kor.
Ujeedada ugu weyn ee maqaalkani waa in lagu ogeysiiyo in aad ogtahay qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah ee Yurub, ugu weyn, kuwa iyaga ka mid ah ee si buuxda loo maalgeliyo si ay kaaga yareeyaan culeyska dhaqaale ee waxbarashada dibadda. Waxaan horey u sii soconnay sidoo kale inaan liis garaynno deeqo waxbarasho oo caalami ah oo si buuxda loo maalgeliyey ee ardayda yurubiyanka ah inay wax ku bartaan dibadda
50 Harvard Koorsooyinka Bilaashka ah ee Ardayda ee Ardayda
Iskuulada loogu talagalay MBA gudaha Mareykanka oo aan lahayn GMAT Ardayda Caalamiga ah
Dugsiga Ganacsiga Harvard Online
Deeqaha Yurub Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee yurubdeeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda caalamiga ahdeeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Yurubdeeqaha waxbarasho ee Yurubdibadda wax ku barta iyadoo deeq waxbarasho la siinayo
Previous Post:6 Koorsooyinka Naadiga Gaarka ah ee PGA & Koorsooyinka Golf | Sida loo Codsado
Post Next:13 Iskuulada ugu Fiican Sawirada Sawirada Caalamka oo leh deeqo waxbarasho
Pingback: 10 -ka ugu sarreeya Deeqaha waxbarasho ee New York ee Ardayda Caalamiga ah
Azariya wuxuu leeyahay,
May 30, 2021 at 8: 50 pm
Waxaan rabaa inaan barto shahaadada koowaad ee cilmiga dhismaha haddii aan helo deeq waxbarasho oo dhameystiran.